क्वारेन्टिनमा सर्पले डसेका कैलालीका एक युवकको उपचारको क्रममा बिहीबार मृत्यु । – Namaste Dainik
क्वारेन्टिनमा सर्पले डसेका कैलालीका एक युवकको उपचारको क्रममा बिहीबार मृत्यु ।
July 30, 2020 July 30, 2020 NamastedainikLeaveaComment on क्वारेन्टिनमा सर्पले डसेका कैलालीका एक युवकको उपचारको क्रममा बिहीबार मृत्यु ।
१५ साउन, कैलाली । क्वारेन्टिनमा बसेका बेला विषालु सर्पले डसेका कैलालीका एक युवकको उपचारको क्रममा बिहीबार मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका-४ का २२ वर्षीय युवक रहेका छन् ।
भारतबाट आएर जेठ २६ गतेदेखि उनी गौरीगंगा-४ स्थित सिद्धार्थ विद्या निकेतनको क्वारेन्टिनमा बसेका थिए । उनलाई असार १२ गते बिषालु सर्पले डसेको थियो ।
उपचारको क्रममा बिहीबार नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालमा मृत्यु भएको गौरीगंगा नगरपालिकाकी उपप्रमुख अञ्चला चौधरीले बताइन्।
युवकलाई उपचारका लागि सुरुमा परिवारले धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पताल लगेका थिए । तर, त्यहाँ भेन्टिलेटर सहितको बेड खाली नभएपछि नेपालगन्ज लगिएको हो ।
उपचारको क्रममा युवकको मृत्यु भएपछि उनका आफन्त तथा स्थानीयवासीले विरोध जनाएका थिए । नगरपालिकाको लापरबाहीले युवकको मृत्यु भएको भन्दै स्थानीयले आन्दोलन नै गरेपछि पीडित परिवारलाख ६ लाख रुपैयाँ दिने सहमति भएको हो ।
‘उहाँहरूको उपचारमा ५ लाख बढी खर्च भएको रहेछ,’ उपमेयर चौधरीले भनिन्, ‘त्यो ५ लाख र १ लाख क्रिया खर्च भनेर दिने निर्णय सहमति भएको छ ।’
दुई वर्षीया बालिका र उनकी आमाको अत्यन्तै दु:खद नि’धन।
भर्खर प्राप्त समाचार: दुई वर्षीया बालिका र उनकी आमाको अत्यन्तै दु:खद नि’धन !! दाङमा पहिरोले घर पुरिँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ। अविरल वर्षाका कारण बुधबार बिहान घरमाथिबाट आएको पहिरोले पुरिँदा बङ्गलाचुली गाउँपालिका-५ साकिनेकी २६ वर्षीया बाटुली नेपाली र उनकी दुई वर्षीया छोरी आयुश्मा नेपालीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ।
गए राति ३ बजेतिर घरमाथिको कान्ला भत्केर आधा घर पुरिँदा उनीहरूको मृत्यु भएको हो। घरमा परिवारका अन्य सदस्य रहेको भए पनि आधामात्रै घर पुरिएकाले अन्य सदस्य भने सकुशल रहेको प्रहरीले बताएको छ। यस विषयमा थप विवरण आउन बाँकी छ।
दुई वर्षीया बालिका र उनकी आमाको अत्यन्तै दु:खद नि’धन !!
दोहोरो स्वर्णपदक जिताउने मण्डेकाजी सम्मानित
मुक्तिनाथ विकास बैंकद्धारा मृ’तकको ऋण मिनाह तथा राहत विरतरण कार्यक्रम सम्पन्न
महानायक राजेश हमालका भाइ राकेश हमालको निधन, परिवार शोकमा
स्पेनको एक नर्स आफै कोरोना भाइरस संक्रमणकै कारणले ज्यान गुमाए पछि भाव विह्वल बनेका उनका सहकर्मी साथीहरु। तस्बिर हेरेर दुनियाँ स्तब्ध ।
April 14, 2020 Namastedainik